Indlela yokwenza iRepost kwi-Instagram 2019 ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayenza njani iRepost kwi-Instagram 2019
Novemba 18, 2017 0 IiCententarios 471
Ukuba uhlala usebenzisa iiwebhsayithi zokunxibelelana, ngokuqinisekileyo uya kusebenzisa ukhetho "Yabelana"Ku Facebook esivumela ukuba siphinde sipapashe eludongeni lwethu kwaye senze iposti eyenziwe ngomnye umsebenzisi kunxibelelwano lwethu.
Okulingana nokwabelana nge-Facebook kuyo Twitter ukhetho "utwithe”Okanye i-Retweet, ekuvumela ukuba uthumele abafowunelwa bakho nge-tweet oyifumene ifanelekile.
I-Instagram ngokuzenzekelayo ayibandakanyi lo msebenzi wokwabelana ngeefoto ozithandayo ezivela kwabanye abasebenzisi, nangona ndiza kukubonisa Ungayiphinda njani kwi-instagram.
Kukho abo banokuphinda baphinde baphendule umfanekiso wokujonga kumfanekiso okwiphepha, emva koko basike, balungelelanise, basebenzise ukuhlela okuchukumisayo kwaye ekugqibeleni babelane ngayo.
Iindaba ezimnandi zezokuba iinketho ezininzi sele zikho kwimarike yensiza izicelo onokuyisebenzisa ukwenza into ekuthiwa yi-Instagram IRegram o Phinda ubhale, wabelane ngeefoto okanye iividiyo zabanye abasebenzisi kunye nabalandeli bakho; kwaye namhlanje ndifuna ukukuxelela ngabo. Undilandele
1 Izicelo zokwenza i-repost Instagram
1.2 Uyinyusa njani kwi-Instagram ngeRostost
1.5 Khuphela i6tag
1.6 Ungayenza njani repost kwi-Instagram esuka kwiPC yakho
2 Indlela yokurekhoda ilula kakhulu
Izicelo zokwenza i-repost Instagram
Ukongeza ekusebenzeni kwiselula yakho iOS y Android, I-InstaRepost inenguqulo yokusebenzisa eyakho yepeni, ngale app awukwazi kuphela ukuphinda iifoto, ungabelana ngeevidiyo zabanye abasebenzisi; nabalandeli bakho be-Instagram kunye nabanye bakho nomphakathi njenge-WhatsApp, Pinterest, Facebook, Twitter ...
I-Instarepost ilula kakhulu ukuyisebenzisa, ikwanenqanaba ngenyathelo-nyathelo ukuze ufunde indlela yokurekhodisha ngokulula izithuba zabanye abasebenzisi.
Sele ifakiwe, faka isicelo kwaye wenze eyakho ukubhalisa ngegama lakho lomsebenzisi kunye ne-password.
Apha ngezantsi ungabona iimpapasho zakho Instagram kwaye xa ufuna isabelo ezinye, ukhetha le foto okanye ividiyo, ukhetha u- "Repost" ukhetho emva koko uphawu lwe-Instagram, ifoto iya kuthunyelwa ngokuzenzekelayo kwiprofayili yakho kwaye unokuyihlengahlengisa kwakhona.
I-InstaPost iza kubandakanya uhlobo lwewatchark, igama lomsebenzisi owenza upapasho lwasekuqaleni kunye negama lomsebenzisi lifakiwe njengenxalenye yenkcazo yemifanekiso ukuze ungalibali ukunika ikhredithi kuye nabani na ohambelana kunye nakwimeko umntu ophinda abeke esinye sezikhundla zakho abanye abasebenzisi babone ukuba ungumbhali wayo.
Kwi-InstaRepost uza kufumana neyakho uhlaziyo, ke akusayi kufuneka ushiye usetyenziso ukubona ukuba kwenzeka ntoni ngezithuba zakho ze-Instagram, jonga ukuthandwa kunye nabalandeli abatsha. Unokukhangela kwaye ukhangele ngamagama, iithegi okanye ii-hashtag iimpapasho ozifunayo.
Uyinyusa njani kwi-Instagram ngeRostost
Le sicelo inenjongo efanayo neyangaphambili kodwa ukongeza i ukukhangela Ukusuka kwabanye abasebenzisi kunye nee-hashtag, sebenzisa ii-tweaks ezithile kwi ushicilelo kwifoto ofuna ukuyithumela kwakhona, ezinye izihluzi kwaye ukhethe indawo ekuyo igama lomlobi kwikhredithi efanelekileyo.
Isebenza ngokwahlukileyo kancinci kuba yenye yezicelo ezisekela ukuthumela kwakhona ikopi ye URL ukusuka kwifoto yomnye umsebenzisi ofuna ukuba wabelane nabalandeli bakho. Inzima kakhulu, kuba iphantse yahlala 11 MB yenkumbulo yakho kunye nenkqubo yokwabelana nabanye abasebenzisi 'izithuba ziyinkimbinkimbi ngakumbi kune-InstaRepost.
Ungangena kwisicelo okanye kwi-Instagram yakho, nje ukuba ukhethe ifoto ofuna ukuyithatha u-Repost, ukhetha amachaphaza amathathu ahlala avele kwikona ephezulu yesithombe.
Khuphela usetyenziso lwePost
Imenyu yokukhetha iya kubonakala kwaye kufuneka ukhethe u "Khuphela i-URL", Ngokunjalo ikhonkco liya kukhutshelwa kwibhodi yakho yokunamathisela nakwimpendulo.
Khetha isaziso esiya kuvela kwiselfowuni yakho kwaye ukusuka apho unokuhlwayela khona ifoto, faka iifilitha, khetha indawo otyholwa ngumbhali wesithombe kwaye uqhubeke kupapasho njengoko uhlala usenza kwi-Instagram, iya kukubonelela nangokubakho Ukwabelana ngezinye iinethiwekhi zakho zentlalo kunye ne-voila, uya kuba uphinde ubuyise ifoto kwi-Instagram yakho.
Wonke umntu unesitayile sakhe kwaye iRegann iphawuleka ukulula Ukusetyenziswa kwayo, into ebaxwayo ngabasebenzisi abaninzi.
Ungayenza kanjani i-repost kwi-Instagram ngeRegran ilula kakhulu, kuba xa uqala usetyenziso kanye olufakwe, luya kukuvumela ipetroli evela kwi-Instagram, awudingi ukungena ngemvume kwisicelo. Ibaleka ngasemva.
Ukwabelana ngomfanekiso womnye umsebenzisi, ngokukhetha kwimenyu yeefoto (amachaphaza amathathu kwezinye iifowuni, avela ekunene phezulu nakwelinye elisezantsi ngasekunene).
Xa ucofa ukhetho "lweKopi ye-URL", isicelo senziwa ngokuzenzekelayo kwaye unokukhetha ezinye iinethiwekhi zentlalo ofuna ukuzipapasha, emva koko zikwisela imo yokuhlela ye-Instagram ukuze ubuyise ifoto ngaphambi kokuba wabelane nayo.
Kuya kufuneka uhlale ukhumbula ukuba i-Regrann, ngokungafaniyo nezinye iinkqubo ezifana ne-Insta Repost okanye i-Repost, ayizukufaka ngokuzenzekelayo kwifoto oyiphindayoUkuchongwa kombhali wefoto. Ungalibali ukuyifaka kwinkcazo yefoto okanye yevidiyo.
Enye indibaniselwano kaRegrann yile guarda Kwigalari yakho umfanekiso othunyelwe ngokutsha okanye ividiyo, oku kunye nako oko akukunyanzeli ukuba ushiye i-Instagram kwinkqubo yokwabelana noshicilelo, yenze enye yezona ndlela zibalaseleyo.
Esi sicelo siyafumaneka kwizixhobo ze-iOS neze-Android, simahla kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Into ekufuneka uyenzile kukufumana ifoto entle yomnye umsebenzisi ofuna ukuyithumela kwakhona, nokuba ikhangelwe ngumsebenzisi okanye ii-hashtag kwaye ukhethe ukhetho "Phindaphinda"Kwaye i-voila, ukupapashwa kuya kuzaliswa ngekhredithi kumbhali wayo.
I-Instagrab ikwavumela ukuba ugcine iifoto zakho ze-Instagram ozithandayo kwigalari yakho, ngenxa yoko ineenjongo ezimbini: Phinda uphinde ukhuphele.
Kwinguqulo ye-Android isebenza ikopi kwaye uncamathisele i-URL yomfanekiso okhethiweyo ukukopa kunye nokuphinda ubeke ifoto oyifunayo.
Hlala kwi-1 MB yenkumbulo yakho.
Le app yasimahla, iphuhliswe nguRudy Huin Microsoft kunye nezixhobo zayo ezishukumayo ngenkqubo Ifowuni yeWindows, iphelele kwaye kulula ukuyisebenzisa, ayisiyiyo kuphela indlela yokulinganisa i-Instagram yabasebenzisi bezi mobiles zikhula iqonga, kodwa ikwabandakanya imisebenzi engenayo ne-Beta version ye-Instagram, njengokujonga iividiyo ezithunyelwe ngabanye abasebenzisi kunye nokwabelana ngeevidiyo zethu.
Kodwa akupheli apho, i-6tag ibonelela abasebenzisi kunye nokukhetha ukuthanda okanye ukuphawula kushicilelo, ukhetho lwe ipetroli Umxholo kunye nokuzikhuphela kwigalari yethu.
Kuya kufuneka ukhethe amachaphaza amathathu abekwe kwikona engezantsi yesithombe okanye upapasho kunye nemenyu ye-4 ibonakalisiwe iinketho: Njengokuphinda uphinde, ukuphawula, ukuphawula kunye nokukopa, ucofe nje kubo usebenze umsebenzi ohambelana kunye nokongeza kwisicelo. Ungabelana nge-repost kunye nabalandeli bakho kwi-Instagram nakwezinye iinethiwekhi zentlalo. Super gqibezela.
Unako fumana abantu kwi-instagram ukunyusa iziqulatho ezingaphantsi komzuzu we-1.
Ungayenza njani repost kwi-Instagram esuka kwiPC yakho
Nangona i-Instagram inganikezeli kuhlobo lwayo lwekhompyuter olunokwenzeka lokwenza iimpapasho kunye nokuphucula kakhulu abanye, icinga ngokunika ukuthandwa, ukwenza izimvo kunye nokuhlaziya uhlaziyo.
Kukho i emulator I-Instagram ungayikhuphela kwikhompyuter yakho kwaye uyisebenzise kuyo njengoko unokukwenza kwisixhobo sakho esiphathwayo.
Le enomzami wokulungisa ibizwa BlueStacks kunye nayo kunokwenzeka ukuba usebenzise izicelo Android ukusuka kwikhompyuter yethu.
Ngale nto kufuneka Khuphela kwaye ufake i-BlueStacks, ke ugunyazise usetyenziso ukuba lukuxhume kwivenkile yokudlala kwiakhawunti yethu kaGoogle.
Nje ukuba ulungelelwaniso lugqityiwe, sinokukhuphela i-emulator yesicelo ukuya yenza iRepost kwi-Instagram ukuba sifuna Zisetyenziswa ngokufanayo ukusuka kwiselfowuni.
Indlela yokurekhoda ilula kakhulu
Yonke into yavela kuba abantu baqala ukubuza "uyenza njani iphosta kwi-instagram" kwaye abasebenzisi baqala ukukhangela izisombululo.
Ewe, njengoko ubona, nangona abadali be-Instagram bengakhange bacinge ukuba singafuna ukwabelana ngeefoto, iividiyo kunye nokudalwa kwabanye abasebenzisi, ngokukhawuleza kwacaca ukuba oku kuyanqweneleka kwaye kuyimfuneko, enyanisweni yinxalenye yokunxibelelana okunokusinceda ukudibanisa iprofayili yethu kule nethiwekhi yoluntu.
Iifoto ozabelana ngazo nabanye abasebenzisi bafuna ukwandisa kwi-instagram Ziyanceda ukuba uzazise kwaye usasaze umfanekiso kunye nomxholo wakho.
Ngesi sizathu, i-Instagram kunye nabanye abadali beesoftware baye baqala ukwenza izicelo ezinokuthi zihlangane nolindelo lwe-Instagrammers, zininzi kakhulu kunezi bendizichazile apha, kodwa bendifuna ukwabelana ngokuthandwa kakhulu, ngoba bonke basebenza ngendlela efanayo.
Kuxhomekeke kuwe ukuba uzame kubo kwaye ukhethe eyona ilungele iimfuno zakho kunye neemfuno.
Ukuba uyazi nayiphi na i-app yokwenza i-kuongeza ixabiso elingcono kunaleyo bendibelane ngayo apha, nceda undazise.
Ngoku uyazi indlela yokwenza i-repost kwi-instagraminto efana retitter kwi-Instagram!
Ngaba ungahamba ngembeko yokwabelana naba bafundi ngale lwazi?
Ungayifaka njani i-gif kwi-Instagram
Amabali e-webhu ye-Instagram